Muxuu Madaxweyne Farmaajo ka yiri Ciyaartii Galabta, isaga oo daawanayay? - Awdinle Online
Muxuu Madaxweyne Farmaajo ka yiri Ciyaartii Galabta, isaga oo daawanayay?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay Ciyaartii kama danbeysta aheyd ee Galabta Garoonka Kubadda Cagta ee Ing Yariisow ku dhexmaray xulalka Gobolka Banaadir iyo Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u hambalyeeyay Xulka Xulka Gobolka Banaadir oo 10 sano kadib ku guuleystay Tartanka Kubadda Cagta dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir
Hambalyo Xulka Kubadda Cagta ee Gobolka Banaadir oo ku guuleystay Koobka Dowlad Goboleedyada Dalka, sidoo kale waxaan bogaadinayaa Xulka Galmudug oo soo gaaray ciyaarta kama danbeysta ah. Labada Kooxoodba waxa ay muujiyeen xirfad sare, isku xirnaan iyo dadaal ballaaran.
Previous articleXulka Gobolka Banaadir oo ku guuleystay Tartanka Dowlad Goboleedyada iyo G/Banaadir
Next articleCiidamada dowladda oo gacanta ku dhigay rag dilay Saraakiil Ciidan